Aynu wada hadlaan waxa warshadaha tareenka ay ka qabanayso si lagaaga dhigo mid ammaan. Inta badan saldhigyada tareenka waxaa sii xoogeysaneyso maamuuska nadiifinta ay tareenada iyo goobaha. Ka sokow sii xoogeysaneyso nadiifinta, inta jeer ee tareenada iyo saldhigyada ayaa sidoo kale kor u kacay. Nadiifinta dhacdaa si saacadeed, oo ka mid ah isticmaalka jeermiska si ay u tirtiri hoos u cuskado, shidista, gacanta iyo musqulaha. waxyaabaha bakteeriyada dheeraad ah, oo ay ku jiraan gacmo nadiifiyaha oo masarka, waxaa la siiyaa at saldhigyada, tareenada iyo goobaha shaqada shaqaalaha.
Waxaan ku talineynaa socday 100% contactless haddii aad awoodid. Haddii aadan soo iibsaday aad tigidhada tareenka online waayo, wax kasta sabab, socday weeraryahanka lacagta waa in ay ahaataa contactless haddii ay suuragal tahay. maxaad? Well, waxaa jira qaar ka mid ah farriimo isku dhafan. Tani waa waxa ugu Bank of England ayaa sheegay in: "Like dusha kasta oo kale oo tiro badan oo dad u soo galeen xiriir la, qoraalada qaadi karaan bakteeriyada ama fayrasyada. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ay keeni karaan qabashada note polymer waa weyn ma jiro oon ahayn taabashada wax caadi ah oo kale meelaha sida la cuskado, shidista ama credit cards. " Horaantii bishan Warbixinta wargeyska a ayaa sheegay in Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) lahaa raso yiri waxaa laga yaabaa in faafo coronavirus ah, sidaas darteed dadku waa in ay isku dayaan in ay isticmaalaan lacagta contactless halkii. Laakiinse haddana waxaa la sheegay in WHO ay beeniyay in ay sheegay in lacag caddaan ah waxaa loo gudbin coronavirus ah, iyo in ay ahayd "been" - si tegi tiradaasi.
Mid ka mid ah Safarka Tareenka ee aadka ugu mashquulsan magaalooyinka waa London. Transport for London bandhigay ah "habaysan nidaam nadiifinta" si loo horumariyo heerka nadaafadda on ee caasimada ah gaadiidka dadweynaha, laakiin waxba si uu u dhaqan bulsho kala fogeynta. Tani waa inaad. line hoose waa in aad u baahan tahay si ay isugu dayaan fogow taabashada dadka kale. Safarka waqtiyo yar mashquul haddii ay suuragal tahay, xidho gacno gashi hadii aad ma ka hortagi kartid taabashada biraha, fariisan iwm. Qaad aad jeermiska u gaar ah kula. Ha ku tiirsan Stations tareenka si ay u bixiyaan idiin waqtiyada oo dhan. Better amaan badan ka xumahay!
silsilado badan oo qaxwaha badan oo haysta Rethink a jawaab u dillaacay coronavirus, la Starbucks si ku meel gaar mamnuucay isticmaalka koob isticmaali karo - sida caadiga ah ka samaysan caag ah, galaas ama baasaboorka wax - nabadgelyada ee labada macaamiisha iyo shaqaalaha. Sida caadiga ah waxaad heli dhimis geeyn aad koob u gaar ah, laakiin ma laga yaabaa in aad ka hesho jawaab la mid ah hadda! Aad ku socoto in ay si lumiyo in dhimis yar ammaanka daraaddiis.
Laakiin waxa aan u malaynayaa waa more muhiimka ah in la tilmaamo in halista badan tahay waa fayraska usugnaaday waayo, 48-72 saacadood uu saaran yahay meel adag, sida tareenka gacanta. Taasi ma khuseyso oo kaliya in ay Tareenadu in kastoo. Waa meel KASTA dadweynaha.
Haddii aad leedahay inay taabtaan biraha, badhamada, tigidhada iyo wixii la mid ah, isku day in aad u samayn hal gacanta ama ka fiican marka la, suxulkaaga! Ka dhig telefoonada gacanta kale "nadiif" iyo labada ku dhaq sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo meesha aad u socoto.
Boorso fudud adiga kuu gaar ah haddii aad u safraya tareen. Tareenno badan ayaa yeeshay ku meel gaar ah ayaa xirey First Class cuntaqda iyo saaray on cuntada guddiga. Sidaas, waqtiga si aad u hesho hal abuur leh lunchboxes aad! khafiifa ama gadashada adiga kuu gaar ah ka dukaamada cuntada saldhigga qaado ka hor inta aadan fuulaysid. Talaabooyinkani waxay yihiin dabcan, loogu talagalay in aad loo ilaaliyo iyo in la yareeyo fiditaanka fayraska COVID-19 ah!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Covid-19: Sidee Tareen Travel Industry tali On safarka?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/covid19-train-travel-industry-advise/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)